ပေကျင်းမြို့လေဆိပ်တွင် COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင် - Xinhua News Agency
ပေကျင်းမြို့လေဆိပ်တွင် COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်
လော့ယန် ပြတိုက်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမွေအနှစ် ရွှံ့စေး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို ရှုမြင်ခံစားကြည့်ခြင်း
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
၂၀၂၂ ခုနှစ်ပေကျင်းအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများသို့လာရောက် ရန် တရုတ်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်လာသူများအတွက် ပေကျင်းမြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ဆိုက်ရောက် ရာ ဌာနတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင် ထားရှိမှုများကို ရိုက်ကူးထားသည့်ရုပ်သံဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | A glimpse at closed-loop management at airport for Beijing 2022
BEIJING, Jan. 26 (Xinhua) — What’s closed-loop management like for people entering China for the 2022 Winter Olympics? Here’saglimpse of the area for arrivals at Beijing Capital International Airport. #GLOBALink
အသက် ၉ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦး မတ်စောက်သည့်၃၈မီတာအမြင့်ရှိ ကျောက်တောင်ပေါ်သို့ အောင်မြင်စွာတက်ရောက်
COVID-19 ကူးစက်မှု ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် ပေကျင်းမြို့၌ ကန့်သတ်မှုများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ ပါတီနှင့် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ မြို့တော်စေတနာ့သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ကြ
တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော်ပေကျင်းရှိ သမိုင်းနှင့်ခေတ်မီ ဗိသုကာလက်ရာများ ပေါင်းစပ်ထားသည့်မြင်ကွင်းများကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)